Ngexesha lotshintsho lika-Obama, uRothman utyhala nzima kwintloko yabasebenzi ukuba baqhube i-NJ ops - Ijezi-Entsha Yezopolitiko
Eyona Ijezi-Entsha Yezopolitiko Ngexesha lotshintsho lika-Obama, uRothman utyhala nzima kwintloko yabasebenzi ukuba baqhube i-NJ ops
Ngexesha lotshintsho lika-Obama, uRothman utyhala nzima kwintloko yabasebenzi ukuba baqhube i-NJ ops
Xa uninzi lwabalingane bakhe beDemokhrasi bexhasa isithandwa sangasemva kwendlu uHillary Clinton ukuba ngumongameli ngaphezulu konyaka ophelileyo, u-US Rep. USteve Rothman (D-9) usike epaketheni kwaye wathatha i-Illinoisan underdog u-Barack Obama.
Iphulo lika-Obama lavuza uRothman ngesikhundla sokuba ngusihlalo we-northeast yommandla kwaye ngokudlala ixesha elide wadlala indima ekhokelayo nenobundlongondlongo egameni lomgqatswa wakhe wobongameli.
Ngoku ukuba u-Obama ubethe uClinton, uRothman wonwabela indawo kwindawo yonyulo jikelele apha eNew Jersey njengabahambi bakaClinton ababuyela umva emva kuka-Obama kwaye bavuma ukuphumelela kukaRothman.
'Kumnqobi yiya emaxhobeni,' utshilo umntu owayesebenza kwinkongolozo ngelizwi lakhe.
Ngelo xesha, umenzi wezomthetho waseBergen uxelele abantu baka-Obama eChicago ukuba ufuna umphathi wakhe, uBob Decheine, eqhuba ikomkhulu lephulo eliseNew Jersey ngaphambi kwe-4 kaNovemba.thUkudibana nomtyunjwa ongumongameli waseRiphabhlikhi uJohn McCain.
Imithombo esondeleyo kwirhuluneli uJon Corzine ithi irhuluneli ivakalise ukuthandabuza malunga nokuxhasa umntu ngqo kwi-ofisi kaRothman, ngakumbi kuba uRothman ukuluhlu olufutshane lwenkongolo yabantu abafuna isikhundla sokuhlala esihlalweni sika-Sen.Frank Lautenberg xa usenator omkhulu ethatha umhlala-phantsi.
UMark Alexander, owayenguMlawuli kaRhulumente we-Campaign ka-Obama kwiziprayimari kwaye ngoku usebenza njengomcebisi omkhulu womgqatswa, uyavuma ukuba inkqubo yokuqeshwa komlawuli welizwe inzima, hayi apha nje.
Sizama ukwakha umsebenzi wesizwe kodwa ilizwe ngalinye linezopolitiko zalo, utshilo u-Alexander.
ENew Jersey, uninzi lwabadlali bamandla bema noClinton kunye nezixhobo zomkhankaso wendoda olinganiswe ngokuyinxalenye nemali yekomiti yezopolitiko eyayibalekileyo u-Obama njengomgqatswa.
Ngoku, lingakanani igunya elinokuthi iqela likarhulumente likwazi ukuhambisa ngaphandle kokulahlekelwa bubuso, kunye namandla kamatshini?
Ngelixa ezongamela eyakhe, iimvakalelo ezindala zobunini kwabanye abaphakathi entshona-ntshona u-Obama-uCorzine njengosihlalo weKomiti yeDemocratic Senate Campaign eyamxhasa kwi-senate yakhe ka-2004-irhuluneli ibuza ubulumko bokuvumela iRothman enamabhongo ukuba ivavanye-iqhube ilizwe lonke iphulo kulo mjikelo wonyulo ubaluleke kangaka.
URothman unyanzelisa ukuba akakhathali ukuba ngubani oqhuba umsebenzi okwangoku.
Ndidibene nomkhankaso ka-Obama, utshilo. Ndiziva ndiqinisekile ukuba siza kuba nephulo eliqinileyo. Nokuba ngubani esinaye njengomlawuli welizwe, loo mntu uyakukhokela iDemocratic Party enomdla nenomdla, engazange yamanyana ngolu hlobo kwiminyaka yam engama-30 kwezopolitiko. Siphindaphindwe kabini amavolontiya ukusukela ngoFebruwari 5, kwaye sizophinda kabini kwinyanga ezayo.
'Eyona nto iphambili kukuba siza kuba nomphathi welizwe oqeqeshiweyo,' wongeze watsho. Yonke into ebalulekileyo ngumbutho wethu ubumbene emva kweSen Obama. Siza kuphumelela iNew Jersey. '
Ubuncinci umxhasi wexesha elide ongekhoyo kwizikhundla zeRothman uthe ulungile ngoDecheine esebenza njengomlawuli wephulo.
NguSodolophu weSixeko saseJersey uJerramiah Healy, usihlalo obambiseneyo wephulo lika-Obama kunye noSodolophu waseNewark uCory Booker.
'Wayengokhetho lwethu lokuqala,' utshilo uHealy malunga nomphathi omkhulu kaRothman. Ndiva ukuba kubonakala ngathi kukho ukuthandabuza. Andazi kutheni. Uya kuba ngumququzeleli omkhulu wephulo. Usebenze kakuhle kwaye angenza umsebenzi olungileyo kunyulo jikelele.
'Eyona nto iphambili,' yongeze usodolophu omkhulu wedolophu, 'kufuneka sifumane lo mgqatswa ubalaseleyo, u-Barack Obama, onyulwe. Andinakukhathalela malunga namabhongo abanye abantu ngonyaka ukusukela ngoku okanye kwiminyaka emibini ukusukela ngoku okanye nanini na. '
Kwimeko apho iphulo lika-Obama lingamkhethi uDecheine, uHealy uthi igqwetha lakhe, u-Bill Matsikoudis, uhlala enomdla. Imithombo ngaphakathi kokusebenza kuka-Obama ithi bagqibe udliwanondlebe nomntu omnye ubuncinci, ibhinqa esele ikwibala lezopolitiko laseNew Jersey.
Ngeli xesha wayekhwele inqwelomoya eya eDenver namhlanje ukuya kwindibano yangaphambi kweDemokhrasi yokuhamba kunye nezinye izitulo zikarhulumente ezingama-49, uJoseph Cryan, usihlalo weKomiti yeDemokhrasi yaseNew Jersey, wathi umbutho wakhe awukho kwimeko yentlekele.
'Siza kuyilungisa le nto kwiintsuku ezimbalwa ezizayo,' watsho uCryan.
Ukubonelela kwangaphambili ngokuqhambuka kombuso oluhlaza okwesibhakabhaka, uMongameli weNdlu yeeNgwevu uRichard Codey (D-Essex) akanamsebenzi nokuba ngubani oqhuba iphulo lika-Obama, nokuba nguDecheine okanye nabani na ongomnye.
'Nawuphi na umkhankaso kazwelonke ka-Obama akhululekile kuye, ngoyena mntu kufanele ukuba abe ngumlawuli welizwe,' utshilo uCodey, ofana noHealy, wongeze ukuba ikomkhulu laseMcCain lokutyhila okupheleleyo ngokucela kuka 'Ronald Reagan Democrat' akuzange kumchukumise.
Le yimeko eyahlukileyo kunangexesha uRonald Reagan wayenotywala eBayonne, utshilo uCodey. Into ka-Obama kwiziprayimari wayebhenela kubavoti abafundileyo, abantu base-Afrika baseMelika kunye nenani elifanelekileyo labasebenzi. Iivoti zabasebenzi bakaHillary ziya kubuya, ngaphandle kwamathandabuzo ngayo. Uninzi lwabo ngabantu abasebenza ngokucacileyo ukuba bangcono phantsi kuka-Obama. Aba ngabavoti bakho baseSpringsteen abasamamele iSinatra. '
Incwadi yencwadi ayifumanekanga ukuba inike izimvo ngemeko yomlawuli welizwe. Kodwa umhlobo osondeleyo kwezopolitiko kasodolophu, iNewark Councilman uRonald C. Rice, owathi kunye noRothman, uHealy noBooker waba ngomnye wamagosa asibhozo okanye alithoba anyuliweyo aqala ukuma no-Obama, wathi inkosi ka Rothman ifanelwe ukuqatshelwa ngokukodwa kulomsebenzi.
'Ngokucacileyo, kuthathe into eninzi kuSteve Rothman ukubamba iqela, utshilo uRice. 'Ufanele avuzwe.'
Ukuba oko akungeni ngohlobo lokuchongwa kuka-Decheine njengomlawuli, onyanzelekileyo uClinton anyanzele ubuncinci kufuneka andise uhlobo oluthile lwesebe lomnquma woluntu, ngokwembono yeRis.
Ukuya kwinqanaba elithile lomlawuli welizwe ngeli phulo, uceba wewadi yasentshona kunye nonyana wesikhumba yezihlangu uSen.Ronald L. Rice, unyanzelisa ukuba umntu oqhuba iphulo laseNew Jersey kufuneka abe ulungile kwimisebenzi esezantsi.
'Sifuna umntu owamkela ubhaliso lwabavoti, obona amathuba okwandisa umlambo, kwaye ngubani onokufumana ivoti kungekuphela nje kwiindawo ezisezidolophini - kodwa kwiNew Jersey ebomvu, utshilo uRice. 'Uya kuba nokudubula kwakho kwiindawo ezinje ngePrinceton, kodwa sifuna ukuya kwiindawo ezisezidolophini apho singakulindelanga oko, kwaye ubeke iitoni zerubhi ngaphezulu kwala manani asisiseko seDemokhrasi, okukhokelela kukoyikiswa komhlaba.'
Ngelixa inkomfa ibiza ibuya ibuye phakathi kweChicago, Washington naseTrenton iqhubeke ngenxa yokuqeshwa komlawuli welizwe, uRothman uhlala egxile kwinto athi iphulo sele liyenzile kunyulo jikelele.
'Kukho abasebenzi abayi-10 abahlawulwayo baka-Obama okwangoku kurhulumente abasebenza ngokufikelela kuluntu kunye neenzame zobhaliso, utshilo u-congressman. Kukho indawo yokuqesha iofisi eTrenton, Cherry Hill naseHackensack. Kukho ama-95 amaqabane ka-Obama asebenza eNew Jersey namhlanje.
'Aba bantu bebesebenzisa inkqubo yoqeqesho ebanzi kwaye basebenza ngokusondeleyo neNew Jersey State Democratic Committee ukuququzelela amakhulu amawaka amaDemokhrasi amatsha aveliswe kwisikolo sethu sokuqala sikaFebruwari 5 kunye nokubhalisa abavoti abatsha.'
I-Saga engaqhelekanga yeVulgar Boatmen, iBhendi enentloko ezimbini
I 'I' yokuba Ndadibana Njani Nonyoko '
'Umceli mngeni we-MTV: Ukuhlaselwa kweChampions' Recap, Isiqendu 7: Achy Breaky Heart
'Ukuthembisa uMfazi oMncinci' akazibopheleli kwezona Ngcinga zinzima
U burt reynolds wasweleka njani
ilivo lelizwi lekorra eska
Uhlala phi u-barack obama
phi ukuthenga i-delta 8 thc
UFrank sinatra unobangela wokufa
iphepha elimhlophe elibuyisela umva iselfowuni